SHANGHAI IZIXHOBO EZINGCONO NJE CO., LTD.
Isixhobo se PDR
Ikhithi yePDR Hook
Iithebhu zeglue ze-PDR
Ukutsala ibhulorho ye-PDR
Thepha izixhobo ezantsi
Umgca weDent Line Board
I-PDR Pump Wedge
Isixhobo sokulungisa umzimba
Isixhobo esiDibeneyo seBhola kunye nesixhobo sePitaman
Bolt kunye neNutter Extractors
Brake kunye Clutch Isixhobo
Isixhobo seXesha leNjini
Isixhobo seNkqubo yokuPholisa
Isixhobo sokuLungisa isiXhobo
Isixhobo seNkqubo yezibaso
Izixhobo zokuLungisa uMbane ngokuzenzekelayo
Ukutywina kunye nesiXhobo seBush
Bopha Intonga kunye nesixhobo seRack Steering
Ukudonsa kunye Nokwahlulahlula
Ukuqhuba kunye neHarmonic Balance Puller
Isixhobo sevili kunye neTire
Isixhobo seStrut & Shock kunye neCompressor yasentwasahlobo
I-POPS A DENT, DIY Dent kunye neDing Removal Kit
ngomphathi ku 21-07-16
Kuqhelekile ukuba iimoto zitshayiswe kwaye zihambe kwinkqubo yokusetyenziswa. Into yokuqala abanini bemoto abayicingayo kukulungisa ngokwabo. Ngeli xesha, kufuneka balungise ngesandla ngoncedo lokutsala imoto. Ukudonsa imoto ngokulungisa i-sag akubizi kwaye kulula kakhulu ...
Usebenzisa njani i-Dent Puller Lifter yokulungisa iiDent Automent
ngomphathi ku 21-07-09
Izixhobo zoLungiso lweDent
ngomphathi ku 21-06-25
I-PDR, ekwabizwa ngokuba ziiPaintless Dent Repair Tools, ichaza indlela yokususa amazinyo amancinci kwimizimba yeemoto. Logama umphezulu wepeyinti uhleli, ipeyinti yokulungisa amazinyo yasimahla ingasetyenziselwa ukulungisa zonke iintlobo zomonakalo. Zombini i-aluminium kunye neepleyiti zensimbi zinokulungiswa ...
Itekhnoloji yezixhobo zokuLungisa iiDent
ngomphathi ku 21-06-18
Amathemba abanzi: E-United States, Japan, Korea kunye namanye amazwe ahambele phambili, kuye kwamkelwa ubuchwephesha boPhuculo lweDent. Inkqubo yesiko lokulungisa isinyithi yenziwe lula ngokusebenzisa itekhnoloji yokungalungiswa kwepeyinti, kunye nepeyinti yokubhaka en ...
Malunga nokulungiswa kwamazinyo angenanto
ngomphathi ku 21-06-11
Ukulungiswa kwamazinyo kwaqala ukwenziwa yiJamani. Abavelisi bezithuthi abaninzi basebenzise itekhnoloji efanayo ukulungisa izithuthi ezonakalisiweyo ngexesha lokuhlolwa kwefektri. Amagqabantshintshi angenakuphepheka kwinkqubo yokusebenzisa imoto. Ngothotho lwee-crowbars ezinobuchule kunye nezixhobo zokutsala, i-ski ...
Yintoni ukulungiswa kweDentless Dent?
Ukulungiswa kwamazinyo angenamibala (PDR) yinkqubo yokususa iidenti kunye nezinye iziphene kumphezulu wesithuthi ngaphandle kokugcwalisa umzimba okanye ukupeyinta kwakhona. Ukuba ipeyinti kwisithuthi yonakele, i-PDR ayinakusetyenziselwa ukulungisa isithuthi. Izitena zihlala zilungiswa ngasemva. Th ...
Ulwazi malunga nokuLungiswa kweGlasi yeMoto
ngomphathi ku 21-03-19
Okwangoku, iglasi emotweni ihlukaniswe ikakhulu kwizixhobo ezibini, iglasi elaminethiweyo kunye neglasi enomsindo. Iglasi elaminethiweyo yiglasi enemaleko emibini kunye nefilimu yeplastiki phakathi kwabo engagqabhukiyo ngokupheleleyo kwaye isasazeka kwimeko yomonakalo kunye nokophuka. Ngenxa yale nto...
Ungasisebenzisa njani isixhobo soLungiso lweDent Car
Isixhobo sokulungisa i-car dent, sisixhobo sangaphandle semoto ngaphandle kokupeyinta kwaye singafaki isinyithi esinezixhobo ezizodwa ezisicaba, kunye nentsusa ngokufanayo. Ke ngawaphi amanqaku aphambili olwazi ekusebenziseni isixhobo sokulungisa uxinzelelo, ekufuneka senziwe ngumntu wonke? 1, c ...
Ukulungiswa koxinzelelo kuthelekiswa nepeyinti yesinyithi yamaphepha esinyithi
Uncedo olunye, isiphumo sokulungisa silungile. Ukulungiswa kwemingxuma usebenzisa ubuchwepheshe obunelungelo elilodwa lomenzi kunye nenkqubo eyenziwe lula, ukugcina imeko yokuqala yepeyinti, ukuze ixabiso lokuqala lesithuthi ligcinwe kwaye libonakaliswe. Isinyithi sephepha lesiko lokuya kwiphepha ...
Izixhobo eziqhelekileyo zoMatshini weSinyithi seZithuthi
Itafile yesinyithi yemoto yindlela yolondolozo lweemoto, ekwabizwa ngokuba ngumsebenzi obandayo. Ukuba imbonakalo yomzimba wemoto yonakele kwaye ikhubazekile, kufuneka kwenziwe inkqubo yesinyithi. Ukulungiswa kokungqubana kweemoto kuphuhlisiwe ukusuka kulwakhiwo lwangaphambili "lokwenza smash welding ukulungisa ...
Uncedo olunye, isiphumo sokulungisa silungile. Ukulungiswa kwemingxuma usebenzisa ubuchwepheshe obunelungelo elilodwa lomenzi kunye nenkqubo eyenziwe lula, ukugcina imeko yokuqala yepeyinti, ukuze ixabiso lokuqala lesithuthi ligcinwe kwaye libonakaliswe. Isinyithi sephepha lesinyithi ukuya kwiphepha lesinyithi, sula i-sputyours, pa ...
Ukulungiswa kweZinto zokuSebenza kweMoto
ukulungiswa kwekhava yangaphambili. Ukulungiswa kwekhava yangaphambili kulula, ngokwemiqathango yokususa i-insulation okanye ukukrazula i-adhesive okanye i-punch inokulungiswa, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba indawo yokulwa ukukhetha kwindawo efihliweyo ingaba. ukulungiswa kwegqabi langaphambili ...
© Copyright - 2021: Onke amalungelo agciniwe.